Trafikana zava-mahadomelina mahery vaika: Afrikanina roa sy Malagasy iray nidoboka am-ponja | NewsMada
Trafikana zava-mahadomelina mahery vaika: Afrikanina roa sy Malagasy iray nidoboka am-ponja
Par Taratra sur 15/11/2018
Karazana zava-mahadomelina mahery vaika, antsoina hoe ”amphetamine”, milanja antsasa-kilao. Izay no saron’ny polisin’ny Brigade criminelle tamin’ireto teratany afrikanina roa lahy, sy vehivavy malagasy iray. Samy naiditra am-ponja, omaly, ireto mpanao trafika ireto.
Vao nigadona telo andro teto Madagasikara ny iray amin’ireto teratany afrikanina roa lahy ireto ka izao tratra nanao trafikana zava-mahadomelina izao sahady. Mahatratra 70 000 Ar no hivarotan’izy ireo ny iray grama amin’ity zava-mahadomelina iray ity (rehefa atao ny kajy dia mahatratra 35 280 000 Ar ny tentim-bidin’ireto zava-mahadomelina ireto). Nahazo loharanom-baovao marim-pototra ny polisy misahana ny fikarohana ady heloka bevava (BC), sakelika fahefatra Anosy fa misy andian’olona mikasa hivarotra zava-mahadomelina mahery vaika eto an-drenivohitra. Nanao fanaraha-maso sy fitsirihana ireo olona izay heverina fa hanatanteraka izany asa ratsy izany ny polisy. Nahitam-bokany izany, ny alahady 11 novambra 2018 tamin’ny 7 ora sy 45 mn teny Faravohitra satria noraisim-potsiny ireo teratany afrikanina roa lahy sy vehivavy malagasy iray niaraka tamin’ireo zava-mahadomelina antsoina hoe “amphetamine” milanja 504 grama.
Naman’ilay afrikanina tratra teny Ivandry…
Amin’ny fisian’ny sampandraharaha misahana ny ady atao amin’ny zava-mahadomelina eo anivon’ny polisim-pirenena dia natolotra ny Stup ny fanohizana ny famotorana. Fantatra nandritra ny famotorana fa vadin’ilay teratany afrikanina tratra nanao trafikana zava-mahadomelina teny amin’ny trano fonenany eny Ivandry, ny volana septambra tamin’ity taona 2018 ity, ilay vehivavy teratany malagasy tratra . Nohamafisin’ny polisy hatrany fa efa manefa ny saziny eny amin’ny fonjan’Antanimora ny vadin’ity vehivavy ity ary ireo roa lahy tratra tamin’izao raharaha maizina izao dia iray fiaviana amin’io teratany afrikanina migadra io. Vao telo andro izay ny nahatongavan’iray amin’ireo teratany afrikanina roa lahy ireo ka izao tratra nanao trafikana zava-mahadomelina izao. Tsy vao izao no nahitana teratany afrikanina mpanao trafikana zava-mahadomelina mahery vaika. Fantatra, araka ny loharanom-baovao hatrany fa lalan’ireo teratany afrikanina mpanao trafika ny eto Madagasikara.